Vehivavy mpiady 5 izay efa nanana olana taloha - Wwe
Vehivavy mpiady 5 izay efa nanana olana taloha
Rehefa Superstar WWE ianao, tsindry betsaka no tonga amin'io toerana io, indrindra raha eo amin'ny lisitry ny vehivavy ianao.
Ireo mpiadina dia mila misolo tena ny orinasa ary tsy maintsy mitazona izany ao ambadiky ny lohany amin'ny fotoana rehetra. Lasa ny andron'ny kayfabe izay ahafahan'izy ireo mamely olona ampahibemaso fotsiny satria tovovavy ratsy amin'ny fahitalavitra izy ireo.
Miaraka amin'ny fihenjanana miharihary amin'ny maha-WWE Superstar anao dia ny fiatrehana fahatsiarovana avy amin'ny lasa. Betsaka amin'ireo Superstars vehivavy WWE ankafizintsika no tsy maintsy nandresy sakana lehibe sasany teny an-dàlana mankany amin'ny fahalehibiazana.
Ny sasany amin'ireo scars tsy maintsy resiny ireo dia vokatry ny trauma tamin'ny fahazazana ary ny sasany dia nitranga taty aoriana teo amin'ny fiainana. Fa na ara-tsaina na ara-batana ny fanaintainana dia mbola namela fahatsapana maharitra izay nahatonga azy ireo ho vehivavy matanjaka ankehitriny.
# 1 Eva Marie
Eva Marie dia nampiala voly ny besinimaro tamin'ny naha WWE Superstar azy ary mpikambana tao amin'ny OG tao amin'ny Total Divas. WWE dia toa nanana drafitra lehibe ho azy fa zavatra iray na iray hafa no nanakana hatrany.
Na dia nandao ny WWE aza izy, dia mbola nifandray tamina orinasa ihany i Eva. Izy dia mirehareha amin'ny asa vitany fony izy niasa tao amin'ny Vince's Circus of Suplexes ary manome valiny ny ankamaroan'ny fandomany sy ny fahombiazany tamin'ireo fotoana natolotra azy raha niaraka tamin'ny orinasa izy.
Saingy talohan'ny nahatongavany ho vehivavy fantatsika rehetra toy ny ankehitriny dia tsy maintsy nandresy olana lehibe sasany i Eva.
Amin'ny maha mpikambana mpikambana ao amin'ny Total Divas azy dia nahatratra azy ny lasa. Tamin'ny fizarana teo alohan'ity andiany ity dia niantso an'i Eva i Cameron mba hanao sary nude talohan'ny nanasoniavana azy tany amin'ny WWE.
Nambaran'i Eva fa mpisotro toaka izy ary izay no antony tsy hisotroany mandraka androany. Niatrika ny adin'ny fiankinan-doha nandritra ny androm-piainany izy ary nitarika azy hidina amin'ny lalana ratsy nandritra ny fotoana maromaro.
Soa ihany fa afaka namadika ny toe-javatra izy ary nifantoka indray. Ankehitriny dia mioty ny tombotsoan'ny fiasàny mafy amin'ny anjara asany amin'ny sarimihetsika sy ny ezaka haino aman-jery maro izy.
ahoana no ahalalanao raha tena misy ny fitiavana
zava-dehibe tokony ho fantatra amin'ny fiainana
ny sipako dia ao amin'ny findainy foana
tononkalo lalina mampieritreritra anao